आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा ओली असुरक्षित, २४ मन्त्रीले चुनाव जित्लान् ? - नागरिक रैबार
पार्टी फुटेको अवस्थामा ओली पक्षका बहालवाला मन्त्रीहरुकै सीट सुरक्षित छैन भने अरु नेताको हालत कस्तो होला ? अनि आफैंले हार्ने चुनाव केपी ओलीले गराउलान् ?तत्कालीन एमालेका नवप्रवेशी स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) बाट चुनाव जितेका हुन् । नेकपाको समर्थनमा जितेका उनले कांग्रेसले भन्दा ५ हजार बढी मत ल्याएका थिए । मधेसी समुदायको व्यक्तिगत भोटसमेत होल्ड गरेका त्रिपाठीले आगामी चुनाव ओली समूहबाट लड्नुपर्ने भएको छ, जसलाई साबिक माओवादी र एमालेको एउटा समूहले समर्थन गर्ने छैन ।
ओली सरकारका आक्रामक मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ०७४ को चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ बाट २२ हजार मत ल्याएर जितेका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका ध्यानगोविन्द रञ्जितले आधा अर्थात १४ हजार मत मात्रै पाएका थिए । यस क्षेत्रमा विवेकशील साझा पार्टीका मिलन पाण्डेले ४९ सय मत पाएका थिए । अहिले नेकपा फुटेको अवस्था ०७४ को गणितले कृष्णगोपाल श्रेष्ठको हकमा पनि काम नगर्न सक्छ । किनभने विगतमा मन्त्री श्रेष्ठ उनै ध्यान गोविन्दसँग हारेका थिए । एक समय त यस क्षेत्रबाट कांग्रेस पहिलो बनेको थियो भने माओवादी दोस्रो र एमाले तेस्रो बनेको थियो । तीनवटै दलका उम्मेद्वारले १२/१२ हजार मत पाएका थिए ।
अर्का मन्त्री प्रभु साहले ०७४ को चुनावमा रौतहट ३ बाट २७ हजार मत ल्याएर जितेका हुन् । त्यहाँ कांग्रेसले १८ हजार र राजपाले १४ हजार मत पाएका थिए । यसपालि एमाले र माओवादी दुबै समूहको मत काटिने भएकाले मन्त्री साहको जित सुनिश्चत छैन । ०६४ सालमा प्रभु साहले ११ हजार मत पाएर चुनाव जित्दा एमालेको मत ३५ सय मात्रै थियो । कांग्रेसको ४ हजार मत थियो भने मधेसी जनअधिकार फोरमले १० हजार मत ल्याएर प्रभु साहलाई टक्कर दिएको थियो । प्रभु साहका लागि अहिलेको अवस्था ०६४ सालको जस्तो उभारयुक्त छैन ।
यसरी, पार्टी फुटेको अवस्थामा ओली पक्षका बहालवाला मन्त्रीहरुकै सीट सुरक्षित छैन भने अरु नेताको हालत कस्तो होला ? अनि आफैंले हार्ने चुनाव केपी ओलीले गराउलान् ? यो प्रश्नको व्यवहारिक जवाफ पाउनका लागि सम्भवतः सर्वोच्च अदालतको फैसला वा त्यसपछि बैशाखसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ । अनलाइनखबरबाट